Igumbi eliphangaleleyo likaVal kwikhaya losapho - I-Airbnb
Igumbi eliphangaleleyo likaVal kwikhaya losapho
Berea, KwaZulu-Natal, eMzantsi Afrika
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguVal
Ikhaya lethu likufuphi nolwandle, iFlorida Rd, iMoses Mabhida neSharks stadia, iithiyetha, iipaki, imiboniso bhanyabhanya kunye nevenkile ezinkulu (i-SPAR esekoneni inesidlo esimnandi sokutya okuphekiweyo nokubandayo). Igumbi oza kulisebenzisa lisemva kwendlu kwaye linesango lalo, ngoko ke unokuza uhambe ngokuthanda kwakho.
Unokufikelela kwindawo yokupaka itshixwayo. Sine-wi-fi, i-air con kunye ne-swimming pool. Nceda uqaphele ukuba idama lokuqubha alinawo umnatha okanye ucingo olujikelezileyo.
Igumbi lakho libanzi kwaye likhaphukhaphu, lineyunithi yokudibanisa umoya.
Kukho ifriji encinci, iketile, iikomityi, iti, ikofu kunye ne-rusks - endlwini!
Uya kukhululeka kumandlalo wenkosi.
Yiza kusasa, singakwenzela isidlo sakusasa selizwekazi elipholileyo (iziqhamo, iyogathi, imuesli) nge-R50.00
Indawo yokusebenzela kunye ne-wi-fi yethu iyakwenza ukuba uqhubeke nosuku lwakho kwi-intanethi ngaphandle komgudu.
Iitawuli ezintsha, isepha kunye neshampu ziza kunye negumbi.
Unokusebenzisa umatshini wethu wokuhlamba kunye nomgca wempahla! Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuhlamba impahla yakho, sinokukwenza ngeendleko ezongezelelweyo.
Nangona igumbi lakho linebhedi enye kuphela, ukuba unabantwana singabeka umatrasi phantsi.
4.85 · Izimvo eziyi-278
IMorningside yindawo endala yaseThekwini enezindlu ezintle nemithi emidala. Sikufuphi kakhulu neFlorida Rd elikhaya leevenkile ezididayo zekofu, nantoni na eyenziwe ngobugcisa, iindawo zokutyela kunye neeklabhu zasebusuku. Sikwakufuphi ne-Durban's Botanic Gardens entle kunye ne-Mitchell's Park kunye ne-zoo yayo eyonwabisayo. Ukuhamba kule ndawo ngexesha lasemini kukhuselekile kwaye siziva sikhuselekile apha ekhaya njengoko sinokhuseleko lwabucala kunye neekhamera.
Ulwandle lukumgama weekhilomitha ezimbalwa, ngokunjalo ne-CBD kunye neZiko leNgqungquthela laMazwe ngaMazwe.
Ndisebenza ekhaya ngoko ke ndihlala ndikhona.
Ungamisela inqanaba lethu lokusebenzisana njengoko sikulungele ngokulinganayo ukukushiya kwizixhobo zakho okanye ukunxibelelana nawe kuzo zonke izinto ezintle ezinikezelwa yiDurban.
Ubungasese begumbi lakho buya kuhlonitshwa ngamaxesha onke.
Ungamisela inqanaba lethu lokusebenzisana njengoko sikulungele ngokulinganayo ukukushiya kwizixhobo zakho okanye ukunxibelelana n…